For Her Myanmar ကလပ်မန်ဘာဝင် အစီအစဉ် – For her myanmar
For her myanmar
Lifestyle Website for Myanmar Women
For Her Myanmar Club
For Her Myanmar ကလပ်မန်ဘာဝင် အစီအစဉ်
မင်္ဂလာပါ For Her Myanmar Club မှ ကြိုဆိုပါတယ်
For Her Myanmar Club အကြောင်း
For Her Myanmar ကလပ်ကို ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာမှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးအများ လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့ ခွန်အားပေး လမ်းပြညွှန်ကြားနိုင်ဖို့နဲ့ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကွန်ရက်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ အမျိုးသမီးသီးသန့် အဖွဲ့အစည်းကို တည်ထောင်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
လစဉ်လတိုင်းမှာ (၅)မျိုး မနည်း ကျန်းမျာရေးနဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ၊ ဒစ်စကောင့် ဘောင်ချာများ စတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အသုံးဝင်စေမယ့်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်တဲ့ လက်ဆောင်ဘူးလေးကို ရုံး (သို့) အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ပစ္စည်းတန်ဖိုးကလည်း ကျပ် ၁၅၀၀၀ ဖိုးကနေ ၄၀၀၀ဝ ဖိုးကြားရှိတာ ဆိုတော့ ပေးရတဲ့ ပိုက်ဆံထက် အများကြီးတန်တာပေါ့နော်။
For Her Myanmar ကလပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ နောက်ထပ် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကတော့ ရန်ကုန်မှာ ပွဲလေးတွေ ကျင်းပပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲတွေမှာဆိုရင် မန်ဘာဝင်ထားတဲ့သူတွေ အချင်းချင်းတွေ့ဆုံ မိတ်ဖွဲ့နိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်အပြင် အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွားစေဖို့အတွက် စီးပွားရေး ၊ ကျန်းမာရေး၊ အလှအပ၊ အနုပညာ စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေး ပြောကြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Valentine's Day 2018 Single Ladies Night Poolside at Novotel Hotel
March Self Defense Class
April Beauty Bar Event at Novotel Hotel
Valentine's Day 2018 Single Ladies Night at Novotel Hotel
မန်ဘာဝင်တွေသာ သီးသန့် ဖတ်ရှုခွင့်ရမယ့် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေး ဆောင်းပါးတွေလည်း ပါဝင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် account ၊ Password (လျှို့ဝှက်နံပါတ်) နဲ့ website မှာ စိတ်ကြိုက် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။
ကျသင့်ငွေ ဈေးနှုန်း> ကလပ်မန်ဘာဝင်ကြေး
ကလပ် မန်ဘာဝင် ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ ဈေးနှုန်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Night Cream အမျိုးအစား ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ? ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တာကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ကြမလဲ?
Posted on August 5, 2019 August 5, 2019 Author Hnin Ei Oo
ဒိတ်တင်လုပ်နေကြပါတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာတဲ့ Kang Daniel နဲ့ Jihyo
Posted on August 5, 2019 Author Wathun
SHINee, EXO နဲ့ NCT က မန်ဘာတွေနဲ့ Boy Group အသစ် ဖွဲ့မယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာတဲ့ SM Entertainment
Posted on August 2, 2019 Author Wathun
ပျိုမေတို့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းအရာများကို မြန်မာဘာသာနှင့် နေ့စဉ်ယူဆောင်လာပေးမှာပါ။
Call us : 09424409727, 09 973476115, 09964203737
For Sales & Business Inquiries :
For Her Myanmar on Facebook
For Her Myanmar Club on Facebook
For Her Myanmar on Instagram
For Her Myanmar on LinkedIn
For Her Myanmar on YouTube
Copyright, 2016 -2018, For Her Myanmar Ltd. All rights reserved. | Eggnews by Theme Egg.